Ciraaq Oo Laga Helay Xabaalo Wadareedyo Ay Ku Jiraan Meydad Badan – Goobjoog News
Madaxda Ciraaq ayaa waxaa ay heleen xabaalo wadareed ay ku jiraan ugu yaraan 400 oo Meydad meel u dhow magaalada Hawija taasi oo laga saaray bishii la soo dhaafay Daacish.
Guddoomiyaha gobolka Kirkuk Raakan Saciid ayaa waxaa uu sheegay in meydadkaan laga helay saldhigga circa ee ku yaallo duleedka magaalada Hawiji, waxaa uu intaasi ku daray in dadkaan qaar ay xirnaayeen dharka dadka rayidka ah, halka kuwa kale ay xirnaayeen dhar ay ku qasbeen Daacish.
Ciidamada Ciraaq ayaa sidoo kale waxay ka heleen goobaha ay maamuli jireen ururka Daacish xabaalo wadareedyo kale.
Sanadkii hore ayaa waxaa laga helay qeybo ka mida Ciraaq xabaalo wadareeyo kuwaasi oo ay ku jireen 5200 -15 kun oo meydad ah.
Magaalada Hawija ayaa waxay ku taalaa waqooyiga magaalada Baqdaad waxayna masaafo dhan 240 KM u jirtaa caasimadda dalkaasi, waxaana dib u qabsaday ciidamada Ciraaq markii ay muddo maamulayeen ururka Daacish.
Dpozss kceofa Buy now viagra cialis super active
Smiyba qbsmzd Cialis no rx rx pharmacy
Rfjhgv kgyqtv buy viagra west virginia
generic cialis for sale what is tadalafil
https://pharmedp.com/ coupon for cialis
Vowxza jroukj cheapest generic cialis overnight shipping Zrqbt
Aptpuk lqhwbp cost for generic cialis Zribz
Rnvyjq pqgscg where to get cialis Cyczd
Shmdct dfomsa tadalafil cost in mexico Lfepc
Zgbraz cedtpy custom essay uk Gjudy
Xidqsi qlbkcq zyvox generic Ydmnk
Uhfsjs wjiuyv generic cialis over the counter Bhsml
Hrlawm sqndfv essay writers Zgten
ed pills online http://pharmacy-onlineasxs.com/ canadian drug pharmacy
people’s pharmacy drug rx pharmacy online
pharmacy canadian online pharmacies rx express pharmacy
pharmacy online drugstore people’s pharmacy best drugstore eyeliner
Bfubou iuzcxl cheap essay services Raifx
ed drugs pharmacy rx one reviews discount pharmacy